ချစ်မ တို့ရေ..ဘယ်အချိန်မျိုးမဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ တစ်ကိုယ် ရည်တစ်ကာယသမားဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုကို ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့ မိခင်တစ်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ် အလေ့အထကောင်းတစ်ခု စတင်ဖို့အတွက် အချိန်ကောင်းအခါကောင်းကို စောင့်နေဖို့မလိုပါဘူး။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုက ဘာလဲဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးရှိရှိ ငွေ (ပိုက်ဆံ) စုနိုင်ဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း ၅ ခုကို ဖော်ပြပေးမယ်နော်။ ကိုယ်နဲ့အတူ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက် ငွေကြေးအာမခံ ချက်ရှိပြီး ပိုမိုစိတ်ချလုံခြုံတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
1. လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါ - ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုက လူကိုပိုမိုကျန်းမာစေပါတယ်။ ဒါဟာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ စေတဲ့ အလွယ်ကူဆုံး လူနေမှုစတိုင်ပါပဲ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရာမှာ အားသာချက်က ဘယ်နေရာမဆို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်ပါပဲ။ အချိန်နဲ့နေရာမရွေး Sis (ချစ်မ) တို့ကို ပိုမိုကျန်းမာတဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ ကူညီပေးတယ်လေ။ ကျန်းမာခြင်းက တကယ်တော့စုဆောင်းခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ကျန်းမာနေရင် အလုပ်များများလုပ်နိုင်မယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်သလို မိသားစုကိုလည် ဖျားနာခြင်းကနေ ကာကွယ်ဂရုစိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်းပြရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကများတယ်မလား? ဒါကြောင့် ကုသခြင်းထက် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက ပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားရမယ်နော်။ ချစ်မ တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ ကျင့်ခန်း အမြဲတမ်းလုပ်ပါ။
2. အကျင့်ဆိုးတစ်ခုကို ဖျောက်ဖျက်ပါ - အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီးကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် လူနေမှုစတိုင်ကို အများကြီးပြောင်းလဲဖို့မလိုပါဘူး။ ငွေကို ချွေတာနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ အပြင်ဆိုင်မှာ ဝယ်စားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွှတ်တဲ့ အစားအစာတွေဝယ်စားခြင်း စတဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျများစေတဲ့ အကျင့် တစ်ခုခုကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အလုပ်များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့ မိသားစုကို အချိန်ပေးတာ နည်းလာပြီး အပြင်မှာပဲ ဝယ်စားနေကြပါတယ်။ အိမ်မှာ အရင်လို မိသားစုထမင်းဝိုင်းကို ဘာလို့ပြန်ပြီး မဖန်တီးနိုင်ရမှာလဲ? လတ် ဆတ်ပြီး အရသာ မြိန်တဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးက မိသားစုကို ပြန်လည်နွေးထွေးစေဖို့ အသေချာဆုံးပါ။ နောက် တစ်ခုအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ထမင်းဘူးပြင်ဆင်ခြင်းပါပဲ။ အပြင်ထွက်ပြီး ဆိုင်ပြင်အစားအသောက်တွေစားတာကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းက ကယ်လိုရီကိုလျှော့ချပေးနိုင်သလို အကုန်အကျလည်း သက်သာစေပါတယ်။
3. ငွေအသုံးစာရင်း ရေးဆွဲပါ (ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲပါ)၊ လိုက်နာပါ - ပုံမှန်အားဖြင့် မိသားစုမှာ အမျိုးသမီးတွေက ပိုက်ဆံကို စီမံခန့်ခွဲကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို စာရင်းလုပ်ပြီး ဝယ်ယူတဲ့ အရာတွေကို စာရင်းမှတ်ထားမယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်တွေက ကုန်သင့်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်း မှာပဲ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
4. အသားတင်အကျိုးအမြတ် ဖယ်ထားပါ - အမျိုးသမီးတွေက အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြတယ်။ တစ်ခုခုဆို ကြိုတင် ပြင်ဆင်တတ်ကြတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသလိုပဲ လူတန်းစေ့တဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတယ်။ ချစ်ရတဲ့ သူတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်မှုပေးချင်ကြတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေက အမျိုးသမီးတွေကို အမှန်တကယ် လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်ဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်။ အစားစားဖို့ လိုအပ်သလို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း ပျော်စရာ အချိန်တွေဖန်တီးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝင်ငွေကို ၁) နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်၊ ၂) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရက်တိုခရီးထွက်ခြင်း၊ မိသားစုနဲ့ မွေးနေ့ညစာစားခြင်း စတဲ့ အကုန်အကျအနည်းငယ်ပိုစေမယ့် စရိတ်တွေအတွက် ဖယ်ထားပါ၊ ၃) ကိုယ်နဲ့အတူ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက် ငွေကြေးအားဖြင့် ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေမယ့် အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ အသားတင်စုငွေအတွက်လည်း ဖယ်ထားပါ။
5. မျှော်လင့်မထားတဲ့အရာတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ - လူအများစုက နေ့စဉ်ပုံမှန်လည်ပတ်နေကြနေ့ရက်တိုင်းမှာ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို မတွေးချင်ကြပါဘူး။ ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) ကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိခြင်းတို့က ကိုယ်နဲ့အတူ ကိုယ့်အပေါ်မှီခိုနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုပါ အကာအကွယ်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ အမြဲစိတ်ချမ်းသာရမှာပါ။ အာမခံထားခြင်းဖြင့် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့ အနာဂတ်ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်ချက်တွေကို စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးဘဝတွေကို နေ့တိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့ Manulife အာမခံကုမ္ပဏီက မြန်မာမိသားစုတွေအတွက် ယုံကြည် စိတ်ချရတဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အသင့်လျော်ဆုံး အာမခံအမျိုးအစား၊ ရယူနိုင်မယ့်အာမခံတွေနဲ့ အာမခံသဘောတရားတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ဖို့ Manulife ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေက သေချာရှင်းပြပေးမှာပါ။ Manulife ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ပေါ်လစီကို ရောင်းချခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းကြောင်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို ဖွင့်လှစ်ပြီး မြန်မာ့စျေးကွက်ထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ချိန်ကစလို့ Manulife က မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အာမခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အမြဲ တမ်း လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးအသုံးချရမလဲ ဆိုတာ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ အမြဲတမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Manulife က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။